INFINITE: INONA IZANY? INONA NO DIKANY? Fampiasana sy maro hafa
Tsy manam-petra: inona izany? inona ny dikany? fampiasana ary maro hafa
Efa nanontany tena ve ianao hoe inona ilay infinito? Androany dia hanana fotoana hamaritana ny zava-drehetra mifandraika amin'ity lohahevitra mahaliana ity izay nisy olona maro tao an-dohany ianao, aza hadino izany.
2 Ny marika
3 Amin'ny faritra samihafa
3.2 Amin'ny tantara
Teny iray ilazana fa tsy misy farany, tsy misy fetra, misy mandrakizay ary zavatra maro no misy ao amin'ny universes ka hatramin'ny fetran'Andriamanitra. Ho an'ny maro ny infinito hevitra fotsiny ny mitady hamaritana zavatra lava be. Mba hamaritana zavatra tsy mifarana ihany koa; Ny teny dia nampiasaina mba hamaritana ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny mandrakizay, ny maharitra, ny tsy manam-petra, na izay mihoatra ny lavitra.
Amin'ny sehatra siansa isan-karazany dia faritana ho toy ny fanondroana zavatra na habe izay tsy misy fetra na farany. Mifanohitra tanteraka amin'ny fetra ary amin'ny matematika dia mifanohitra amin'ny fe-potoana voafetra, voafetra; dia voatondro miaraka a Tandindona tsy manam-petra izay misy tsipika boribory miseho tsy misy teboka mifampitohy (∞).
Mikasika ny tandindona dia azontsika atao ny milaza fa misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa azo faritana raha manana fiandohana na fiafarana izy, tsy voafaritra hoe aiza no manomboka sy manao ahoana no manomboka azy, ary koa hoe aiza no manomboka azy; ny tena izy dia ankehitriny dia faritana amin'ny fifehezana maro ary fantatra fa valo mandainga.
Amin'ny faritra samihafa
Ny iray amin'ireo siansa nampiasa ny teny faran'izay betsaka dia ny matematika, izay miaraka amin'ny siansa informatika, astronomia, fizika ary taranja samihafa, dia nanome anarana mitovy amin'izany. Amin'ny sehatry ny fivavahana dia ampitahaina amin'Andriamanitra izy sy ny andriamanitra mandrakizay izay tsy manam-potoana na fotoana; fa andao jerena ny fomba amaritan'ny faritra sasany azy ireo.
Izy io dia ampiasaina hamaritana ny hetsika sasany izay tsy misy fetra, ny teôlika napetraka dia mamaritra azy amin'ny sanda izay miakatra amin'ny minus infinite ka miampy infinity. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny isa mahazatra, izay mitazona ny filaminana ao anaty kônta; Toy izany koa, ny isan'ny tsy manam-petra dia amin'ny antsipirihany amin'ny isa nomerika voalohany sy ny isa kardinaly tsy manam-petra.
Ny mariky ny tsy manam-petra dia nalaina voalohany rehefa nampidirin'ilay matematika anglisy John Wallis ho iray amin'ny sanganasa siantifika ao aminy. Ity marika ity dia azo jerena ho toy ny fanamarihana matematika ao amin'ny boky Arithmetic Infinitorum tamin'ny 1656; taty aoriana dia naseho tamin'ny endrika sary ary araka ny ahalalantsika azy ankehitriny ho lemniscate (sary misy tarehimarika marindrano 8) amin'ny fanontana 1894, ao amin'ny sanganasa matematika an'ny mpahay siansa soisa Jacob Bernoulli. (1655-1705).
Na izany aza, misy ny mety hisian'ny finoana, izay ahalalana ny famantarana dia avy amin'ireo famantarana izay nampiasaina tamin'ny fizotran'ny alchemy, ary koa amin'ny boky ara-pivavahana sasany tamin'ny taonjato faha-17. Ao ilay marika tsy manam-petra dia manondro bibilava mihorona amin'ny endrika 8 antsoina hoe uroboros.
Ny teôria hafa dia nanandrana nampifandray ilay tandindona tsy manam-petra amin'ny toe-javatra masina sy mihoatra ny natoraly. Toy izany ny trangan-javatra ara-toetr'andro antsoina hoe Analema izay ahitana tarehin-javatra tsy manam-petra hita any an-danitra nefa tsy misy fanazavana; lazain'ny olona fa amin'ny toe-javatra tsy dia misy dikany loatra na mihoatra ny natiora.
Ny teoria farany indrindra dia mikasika ny foronina sy ny sarimihetsika, izay mampifandray ireo mpamorona ny maherifon'ny Avenger ary mampiseho matanjaka infinity gauntlet, izay tarihin'ny lehilahy matanjaka sy ratsy fanahy antsoina hoe Tanos, izay mitady handray an'izao tontolo izao: ny zava-misy dia maro ny olona no mieritreritra fa tena misy io fandaminana io, izay mamorona tantara foronina sy lainga lehibe amin'ny fanambarana.
Amin'ity sehatry ny teknolojia ity, ny isa na ny tsy manam-petra dia mifandraika amin'ny fiteny fandaharana sasany. Ireo dia mamela hanome lanja manokana ary miantso azy io hoe infinity; ny sandam-bola toy izany dia azo avy amin'ny valiny, aorian'ny fanaovana asa matematika tsy misy fotony na tsy azo tanterahina (teny izay tsy azon'ny mpandahatra programa).
Na izany aza, rehefa manontany ny iray amin'izy ireo ianao dia manazava izy ireo: Asa be loatra izy ireo, azo atao ny mamaha saingy ny manam-pahaizana momba ny programa ihany no tokony hanao izany; ka amin'ny solosaina ihany no mampivoatra azy ireo, miady hevitra ihany koa izy ireo fa raha tamin'ny fiteny tsotra kokoa no nanatontosana azy, dia niteraka lesoka ny valiny.
Io faritra misy fifandraisana ara-panahy io dia mamaritra azy ho "Ny tsy manam-petra", izany hoe, manome azy fananana sy mpampianatra. Tsy manaiky fameperana izy io, tsy misy fepetra ary tsy voafaritra tanteraka izany, ka raha voafetra izy dia tsy hanaiky fetra.
Metaphysics dia manambara fa ny famerana ny fetran'ny tsy manam-petra dia ny fandavana ny fahamarinan'izao rehetra izao; mandà tanteraka ny fitanana. Amin'izany fomba izany ny fanilihana fetra iray dia ny fandavana ny fandavana izany; amin'ny teny hafa, ny fandavana ny fetra rehetra dia mitovy amin'ny zava-misy amin'ny fanamafisana tanteraka sy tanteraka; Heverin'izy ireo ihany koa fa izay tsy misy fetra dia azo holavina ary noho izany izay misy ny zavatra rehetra ivelan'io, noho izany dia tsy misy.
Ity foto-kevitry ny tsy manam-petra ambaran'ny metafizika ity dia misy criteriona feno antsipiriany momba ireo izay asehon'ity hevitra ity; ho azy ireo dia tsy marika fotsiny fa zavatra misy ary koa, tsy lavin'izy ireo ny fisiany satria tsy misy fetrany.
Araka ny voalazan'i Aristote, ny hevitra voafetra dia mandà ny fisian'ny tsy manam-petra. Amin'izany fomba izany rehefa miresaka fetra amin'ny tsy manam-petra amin'ny eritreritra Aristotelian, dia ilazana vatana tsy manam-petra izay mifanohitra amin'ny fisian'ny voafetra; Na izany aza, ny onja filozofia hafa dia milaza fa ny hery tsy manam-petra dia isa izay azo ampiana isa hafa foana nefa tsy mahatratra fetra farany.
Ireo filozofa dia mino fa ny tsy manam-petra dia famoronana olombelona, ​​ary indrindra rehefa nanomboka niseho ny isa dia manamafy ny sandan'ny isa tsy manam-petra ny exponentialite ary arakaraka ny itadiavana ny antony sy ny toerana ahazoana tarehimarika dia hitombo sy hitombo hatrany. ; izay tsy misy karazana tanjona na vahaolana.
Raha tianao ity lahatsoratra ity, dia manasa anao izahay hamaky ny manaraka, izay aseho koa ireo lafiny mahaliana Isa voajanahary: inona ireo? endri-javatra, sy ny maro hafa
Fahefana Inona izany? Ahoana ny fomba famoronana azy? ary maro hafa
Telozoro Isosceles: Inona izany? fanasokajiana sy maro hafa
Tarehimarika geometrika lehibe sy ny anarany
Takelaka fampitomboana 1 ka hatramin'ny 10: Fitaovana lehibe
Famaranana isa voajanahary: inona no ahitana azy?